U-Ace uzobe ethola izizumbulu zemali, ebe ehleli ekhaya | Scrolla Izindaba
U-Ace uzobe ethola izizumbulu zemali, ebe ehleli ekhaya
Njengoba ezohola izi-R130,000 njalo ngenyanga, u-Ace Magashule kulindeleke ukuthi athole imali elinganiselwa kwizigidi ezingu-R2.5 njengoba ezobe ehleli ekhaya elinde ingqungquthela yokukhetha ubuholi ngoZibandlela ngowe-2022.
Lesi yisicupho i-ANC ewele kuso, ukumisa abaholi beqembu kodwa baqhubeke nokuholelwa ngokugcwele ngenkathi belwa izimpi zasenkantolo.
Unobhala-jikelele omisiwe akuyena yedwa.
Ukumiswa kwezikhulu emsebenzini kodwa ziqhubeke nokuholelwa ngokugcwele, sekuyinto ejwayelekile ku-ANC nakuhulumeni wayo obenabasebenzi abayi-6 344 abamisiwe ngonyaka wezimali ka-2020/2021, okwenza isikweletu sezigidigidi ezingu-R2.4 zemiholo yezikhulu ezimisiwe.
Lokhu kuphambene kakhulu nesimo abasebenzi be-ANC abazithola bekuso.
Ngenyanga edlule nje umphathi Jikelele we-ANC uFebe Potgieter uthumele i-imeyili kubo bonke abasebenzi baseLuthuli House ebhalwe ukuthi: “Ngenxa yezinkinga zezimali, ukungaqiniseki mayelana nosuku oluqondile lokukhokhwa kwamaholo kungenzeka kuqhubeke ezinyangeni ezintathu kuya kweziyisithupha ezizayo.”
Incwadi ebhalwe mhla zingama-30 kuMbasa ngowe-2021 ibivele ifike ngemuva kwezinsuku ezinhlanu njengoba usuku lokuhola beluzoba mhla zingama-25 kuMbasa.
NgoNtulikazi ngowe-2020, abasebenzi be-ANC kwadingeka ukuthi benze amalungiselelo nabanikazi bezindlu nalabo ababakweletayo njengoba amaholo enyanga kaNhlaba ngowe-2020 ayebambezelekile futhi ukungaqiniseki kwaqhubeka phakathi nesikhathi samaholide kwaze kwaba uMasingana ngowe-2021.
Kungalesi sizathu-ke manje ukwethulwa umthetho wokwesula ongaba nomphumela wokumiswa kwabaholi abaningi kodwa baqhubeke nokuqeda isikhwama seqembu.
Okhulumela i-ANC uPule Mabe, uthi okwamanje akazi ukuthi zingaki izincwadi zokumiswa ezikhishwa yihhovisi likanobhala uJessie Duarte njengoba leyo mininingwane izokwethulwa kwi-NEC kule mpelasonto.